အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက် ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့သစ်ပင် ကိုယ်ခုတ်မိလို့ အဖမ်းခံရသူ - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက် ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့သစ်ပင် ကိုယ်ခုတ်မိလို့ အဖမ်းခံရသူ
admin | April 23, 2020 | Local News | No Comments
အဖမ်းခံရတဲ့ လွှသမားတစ်ဦးရဲ့ ခလေး ၃ ယောက်ရဲ့ အခြေအနေကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဒီနေ့ သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်က ကလော့ရွာဟောင်း မှာ၊ မိုးတွင်းမှာ အမြဲရေမြုပ်တတ်လို့ထင်ပါရဲ့။ အိမ်ကိုအမြင့်ကြီး ခြေတံရှည်ဆောက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ အိမ်က open type. တံခါးမရှိ၊ ပြူတင်းပေါက်မရှိသေး။ အိမ်ပေါ်တက်လိုက်တော့ အိမ်မကြီးက အခင်း မရှိပြန်။ ဆင့်တောင်မှမစုံ။ လွှအငှားလိုက် ထင်းအငှားဖြတ်ရင်း လုပ်ခလေး နဲနဲရလိုက်၊ အိမ်ကို နဲနဲထပ်ဖြည့်လိုက် သစ်ပြားလေး တစ်ပြားနှစ်ပြားရလာရင် စုထားလိုက် ဆိုတဲ့ ပုံပါပဲ။
အကြီးဆုံးမိန်းကလေးက အိမ်မှာမရှိဘူး။ အလည်က ၁၂နှစ် အငယ်က ၆ နှစ်၊ နင်တို့အမရောလို့ မေးလိုက်တော့ အဖေကို ထမင်းသွားပို့တယ်တဲ့။ နင်တို့ထမင်းစားဘို့ ပိုက်ဆံဘယ်ကရလဲ လို့မေးတော့ အမလိုက်ချေးတာပေါ့လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ကျေးရွာအုပ်မှူးကတော့ မနေ့က ဆန်နဲ့ စားစရာဝယ်စားဘို့ သူ တစ်သောင်းပေးထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အကြီးမက ၁၈ နှစ်လောက်ရှိပြီး လောလောဆယ်အလုပ်မရှိကြောင်းလဲ ပြောပြတော့ ဒီကလေးတွေ အဖေဘယ်တော့မှ ပြန်ရောက်လာမလဲမသိ၊ အဖေလွတ်ရင်ပြီးရော ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုပြီး မနူးမနပ်အရွယ်နဲ့မဆင်မချင် လုပ်ကြရင်ဖြစ်…. ဒီခလေး ၃ယောက် ဘယ်လိုရှေ့ခရီးဆက်ကြမလဲ တွေးပြီး သက်ပြင်းပဲ အခါခါ ချမိပါတယ်။ မြို့နယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်ရပ်ကြောင့် မိသားစုတစ်စုတော့ ကိုဗစ်အကျပ်အတည်းကာလမှာ ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်ပါပြီ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က အိပ်ထဲပါလာတဲ့ ငွေငါး‌သောင်း၊ ရေးမြို့နယ် NLD ဥက္ကဌ ဦးကျော်မိုးအေးက ငွေ သုံးသောင်း ခလေးတွေ လောလောဆယ် ဝမ်းရေးအခက်မပွေအောင်ပေးရင်း ကလော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုရော၊ အရပ်ထဲက ကိုယ့်အသိတွေကိုရော ခလေးတွေကို ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ပေးဘို့နဲ့ အခက်အခဲရှိရင် ဆက်သွယ်ဘို့ မှာထားခဲ့ရပါတယ်။
အပြန်မှာ မနေ့က သစ်ဖမ်းတဲ့နေရာကို ဝင်စုံစမ်းကြည့်တော့ သစ်ပင်က လမ်းနံဘေးခြံမှာ၊ ပုံမှာ ကားရပ်ထားတာရဲ့ဘေးမှာပဲ။ သူ့ခြံထဲကအပင်ကို ခုတ်ဘို့ အဘိုးကြီးက သူ့တူကိုခေါ်ခိုင်းတော့ သူ့တူက ဝိုင်းလုပ်ဘို့အဖေါ်တစ်ယောက် ခေါ်လာပြီး သစ်ပင်လှဲတာပါ။ လုပ်နေတုံး သစ်တောဌာနကရောက်လာတယ်။ သူတို့ကလဲ ခြံကသစ်ပဲဆိုတော့ မပြေးကြဘူး။ သစ်တောက ရဲခေါ် လက်ထိပ်ခတ်မှ အဖမ်းခံရတာကိုသိတာ၊
လမ်းဘေးဆိုတော့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ ရောက်လာကြ၊ ဒီလောက်ထိမလုပ်ပါနဲ့၊ ပညာပေးပြီး သိမ်းစရာရှိတာသိမ်းဖို့ ဝိုင်းပြောကြသတဲ့။ အဲဒီမှာ ဦးစီးအရာရှိက တခြံကျော်မှာ ထင်းဖြတ်နေတဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ စက်သမားတစ်ယောက်ကိုပါ ထပ်ဖမ်းပြန်သတဲ့၊ ဒါကြောင့်သစ်တောဌာနက တင်တဲ့ပို့စ်မှာ လွှသမား ၃ ဦးဖြစ်နေတာလို့ ရှင်းပြကြတယ်။
ဒီတော့ တရားမဝင်သစ် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကို ပြောဖို့ လိုလာတဲ့အပြင် တရားခံ ၄ ဦးဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း လွှသမား ၃ ဦးကို တရားဝင်လိုင်စင်မရှိလို့ တရားခံလို့ အကြမ်းဖျဉ်းဆိုနိုင်သော်လည်း သူ့ခြံကသစ်ကို သူ့ကိုယ်ပိုင်သုံးအတွက် သူခုတ်တဲ့သူကို၂၀၁၈ သစ်တောဥပဒေက ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ သူ့ကို တရားခံလို့ တိတိကိကျ သတ်မှတ်နိုင်ပါသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
writer by myo win
လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့်အခါ သည်းခံခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မှသာ အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ကြား